Doorashooyinka Yurub: liisaska saddexda iyo sodonaad ayaa la daabacay, diiwaanka - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA Doorashooyinka Yurub: liisaska saddexda iyo sodonaad ayaa la daabacay, diiwaanka
Doorashooyinka Yurub: liisaska saddexda iyo sodonaad ayaa la daabacay, diiwaanka
Bixinta musharaxiinta ayaa la xiray tan iyo fiidkii jimcaha, iyada oo siidayntii runta ahayd ee ololaha. Faahfaahinta liisaska, arimaha, nidaamka cod bixinta ... dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato doorashooyinka Yurub ee 26 ee Maajo.
Bilowga dhabta ah ee ololaha 26 ee May Doorashooyinka Yurub ayaa la bixiyaa. Iyo markii ugu horeysay ee la yaab leh ayaa ku jira diiwaanka guud ee codsiyada daabacaadan. Waqtiga xidhitaanka codsiyada, Jimco 3 May, maya wax ka yar soddon iyo saddex liisto ayaa si rasmi ah loo diiwaan geliyay.
Liiska saddexda liis ee diiwaanka
Doorashooyinkii ugu dambeeyay ee 2014 ee Yurub, liisaska 193 ayaa la diiwaan geliyay, hase yeeshee, doorashooyinka, ka dibna waxaa loo abaabulay siddeed meelood oo kala ah, todobo magaalo iyo hal degaan oo dibedda ah. Taas oo celcelis ahaan ka dhigtay liisaska afar iyo labaatanaad ee liiska doorashada. Tan iyo markaas, sharciga 25 June 2018 leeyahay soo celiyay hal degmo. Markii ugu danbeysay ee ay tani ahayd kiiska in 1999, labaatan liiska ayaa ku tartamaya iyo in waa PS, hogaaminayo François Hollande, ayaa waxaa kaalinta koowaad la 22% codadka, halka Nicolas Sarkozy RPR heli 12,7% iyo% FN Jean-Marie Le Pen 5,7. In 2014 in ku dhawaad ​​$ 25% codadkii, Front National ku guulaystay, iyo sidoo kale ka hor UMP (20,8%) iyo PS (14%).
Qodobka loo qoondeeyey macaamiisheena Sidoo kale akhri Emmanuel Macron oo la kulmay naxdinta Faransiiska
Kulanka ugu horreeya ee ciyaarta
Ujeedada codbixinta saddex toddobaad ka hor inta aan warqadda cod-bixinta aan loo baahneyn ayaa loo qoondeeyey si amar ah. In ka badan kala badh ka mid ah kuwa dantoodu muujiyay ee xiisaha leh ee ololaha iyo tobankii tobnaadba waxay muujinayaan rabitaankooda ah inay codeeyaan. Si kastaba ha ahaatee, sannadkii la soo dhaafay, dhammaan ra'yiururinadu waxay horey u soo gudbiyeen liisaska ku yaala Jamhuuriyadda Dhaqdhaqaaqa (LRM) iyo Rally National (RN). Ciyaartu, labada dhinac, qof walba wuxuu ku dadaalaa inuu ku rakibo ra'yiga dadweynaha.
Waayo, Emmanuel Macron, waxaa lagama maarmaan ah, labada gudaha siyaasadeed si loo adkeeyo sumcaddii ay masraxa Yurub oo xilkeedii-à xilkeedii hawlgalayaasheeda, liiska hogaaminayo Nathalie Loiseau dushiisa. Marine Le Pen, Dhanka kale, dooni ay uga faa'ideysan 2014 guusha iyo soo rogi RN ma aha oo kaliya sida xisbiga mucaaradka ugu horeysay laakiin sida "Xisbiga ugu horeysay ee France." Muddo bilo ah doorashada opinion siin qoorta iyo qoorta u dhexeeya 20 25% iyo% ku xiran isbedbedelka la yar hogaanka u ah RSM. Ilaa dhowrka maalmood ee ugu dambeeyay, sababtoo ah machadyada qaarkood ayaa diiwaangashan isgoysyada u dhaxeeya labada liisto, oo ka tarjumaya bilaabitaanka jilicsan ee ololaha loogu talagalay wasiirkii hore ee arrimaha Yurub. Kala duwanaanshaha, si kastaba ha ahaatee, waxay ku sii jirayaan khaladaadka. Sidaa darteed daciif, sidaas darteed, si ay u soo jiidaan wax kasta oo ka mid ah.
Qodobka loo qoondeeyey macaamiisheena Sidoo kale akhri Tartanka u dhexeeya LRM iyo LR, fure u ah natiijada ugu dambaysa ee doorashooyinka Yurub
François-Xavier Bellamy xilli hore u muuqataa in ay iftiimisid liiska la soo bandhigay oo ay Jamhuuriga, kuwaas oo la diiwaan geliyey ay Cabsato in doorashada, agagaarka 14%. Tani waa mid caqli-gal ah: sanadka, celcelis ahaan celceliska ra'yi-dhiibashada ra'iisal wasaaruhu ma uusan siin tababarka uu hoggaaminayo Laurent Wauquiez oo ka hooseeya 12%. Haddii ay dhacdo in kasta oo, waxaa ka fog 20% codadka la ururiyey in wareegga koowaad ee doorashada madaxtinimada by 2017 Francois Fillon ama 21% ee UMP ee doorashooyinka Yurub 2014 weli. LR, yoolka ayaa ah in la isku dayo in la qaato xirmo rasaas ah si ay u awoodaan in ay sheegaan "Xaqiiqda waa soo laabasho". Midowga dhex dhexaadka ah ee xisbiga iyo kuwo go'aansaday in keligaa tag u soo bandhigaya liiska hogaaminayo Jean-Christophe Lagarde, kuwaas oo isku dayi doono inuu dhaafo 3 magdhawga% loo baahan yahay ee kharashka ololaha.
Qodobka loo qoondeeyey macaamiisheena Sidoo kale akhri Dadka Yurubiyaanka ah: Codbixinta waayeelka waxay ka duwan yihiin kuwa yaryar oo ka yar inta kale ee Faransiiska
Qeybta bidix ee nidaamka kala firidhsan
bidix u muuqataa habka xujo la yaqiinsan inuu ka tago doorashada more filiqsanaa. Laba tababar, France waa caasi, Manon Nahla top liiska, iyo Europe Ecologie-Greens, ka danbeeya Yannick Jadot jiidhaya in ay gaaraan% sumadda 10 ama ugu yaraan ku guuleysto orodka in laabatay kooxda. Arrinta muhiim u tahay dhaqdhaqaaqa Jean-Luc Mélenchon, oo ku guuleystay 19,6% wareeggii koowaad ee doorashadii madaxweynenimada, haddii uu rabo inuu sii wado rajadiisa "federaal caan ah".
Liiska hoos ku qoran, liiska Xisbiga Sucuudiga ah iyo Goobta Dadweynaha, oo uu hogaaminayey Raphael Glucksmann, iyo Génération.s, oo uu hogaaminayey Benoît Hamon, la dagaallamayaan hadhaagii dhaxalka dhaxal galnimada oo leh hammuun jilicsan, mid waliba, si uu uga hor tago kan kale oo ka gudbo barxadda 5% hubinta matalaadda Baarlamaanka Yurub. Muuqaalkan kala-baxsan, Xisbiga Faransiiska Faransiisku wuxuu kaloo soo bandhigayaa liis. Hogaamiyaha, Ian Brossat, wuxuu sameeyey kulan muhiim ah oo ku saabsan doodda, laakiin ma hubo in tani ay ku filan tahay in ka badan heerka 3%.
Heer aad u sarreeya, sida doorasho kasta, waxaa ka muuqda dagaal yahanka Shaqaalaha ah iyo liiska hogaanka Nathalie Arthaud. Inkastoo ciyaarta ay sidoo kale isku minguurisay liis ay ku qorantahay ecology, waxaa hoggaamiya Dominique Bourg oo ku jira booska ugu sareeya ee loo yaqaan Delphine Batho.
Faro iyo madaxbannaani
palette waa ballaadhan oo dhinacan ah yire liiska Courage ah si ay u difaacaan Faransiis ah soo bandhigay by Nicolas Dupont-Aignan, Wadajir Frexit François Asselineau wadajir ah waddaniyiin iyo jaakadaha huruud ah Florian Philippot. Added in tani si cad loo tilmaamay on liiska ilaa hadda xaq u eg kuwa line The cad, gudbiyay theorist ah "badal weyn" Renaud Camus, ama reconquest ah, soo bandhigay by Faransiis Muranka, kooxda jab yar hogaaminayo Vincent Vauclin.
Liisaska "jaallo jaalaha ah"
Oo mid ka mid ah, iyo laba, saddex iyo "jaakadaha jaalaha ah" liisaska, xitaa haddii aysan si cad sheegan sida: jaalle ah Alliance sida fanaanada hogaanka Francis Lalanne, Citizen Change, gudbiyay tirokoobyo ka mid ah dhaqdhaqaaqa, Christophe Chalançon iyo dhaqdhaqaaqa ee muwaadiniinta 'initiative, ka kooban musharax barbaro iyo sheeganaya ee muwaadiniinta' afti initiative. shakhsiyaad kale oo isku mar ah ama mid kale, wuxuu lahaa oo ay shan iyo toban daqiiqo oo celebrity biiray liiska siiyey, sida wixii reer Benyaamiin ka Cauchy Nicolas Dupont-Aignan ama Jean-François Barnaba in Florian Philippot.
Qodobka loo qoondeeyey macaamiisheena Sidoo kale akhri Kuwa yurubta soo socda waxay kala qaybiyaan "jaallo jaalaha ah"
Xisbiyada burcad-badeedda, royalist List, Xayawaanka xoolaha ...
Si aad u buuxiso qasan this, ku dar liiska royalist ah, xisbiga burcad ah, Democracy ah Ergeyga, Koox ka mid ah muwaadiniinta Faransiiska, a European federalist Party, xisbiga ah xuquuqda xayawaanka, kale dhexdhexaad ah oo firfircoon, kacaan shuuciga ah, liiska oo keliya ee ka kooban ka yar 30 sano, carruurtu ha, taageerayaasha hoos u sinnaanta jinsiga, Isberento ama dimuqraadiyadda wakiil, in aan ku xuso illoobay Europe iyo Democratic Union ee xoriyadda, sinnaanta iyo walaaltinimo. Koobka waxaa ka buuxa.
Nidaamka cod bixinta
The doorashooyinka Yurub lagu qaban doonaa dhexeeya 23 iyo 26 May ku xiran dalka. In France, doorashada waxaa la qaban doonaa 26 Sunday, May ee France, Reunion, Mayotte, New Caledonia oo Wallis iyo Futuna iyo safaaradaha iyo qunsuliyadaha nool Faransiiska ka baxsan France, marka laga reebo Americas . Waxaa la hormartay si Saturday 25 May ee Guadeloupe, Martinique, Guyana, Saint Martin, Saint Pierre iyo Miquelon, Faransiis Polynesia iyo goobaha codbixinta furay safaaradaha iyo qunsuliyadaha ee Ameerika.
Codkani wuxuu arkayaa soo noqoshada, Faransiiska, hal degmo, iyada oo sidoo kale ay tahay kiis saddex ilaa labaatan iyo saddex dal oo kale ah. Kaliya Belgium, Ireland iyo Talyaanigu waxay qabsadeen nidaam doorasho oo badan. Wakiilada baarlamaanka Yurub ayaa loo doortaa celceliska ugu sarreeya. Kaliya liisaska laga helay ugu yaraan 5% codadka la siiyay waxay xaq u yeelan doonaan dhowr kursi oo isir ah tirada codadka la dhiibay. Liis kasta oo ka kooban mowjad kasta oo jinsi kasta, waa in lagu daraa musharaxiinta badan sida kuraasta loo buuxiyo.
Si kastaba ha ahaatee, biil soo bandhigay in April 24 golaha wasiirada waa in la tixgeliyaa in nidaamka la dedejiyey Monday 13 May ee Barlamaanka Qaranka iyo Thursday May Senate 16 si ay u muujiyaan muddada dheeraadka ah ee UK ka mid ah Midowga Yurub. Sidaa darteed, codbixiyayaasha Britishka ayaa iyaguna dooran doona, 23, wakiiladooda 73 ee Baarlamaanka Yurub.
In ay go'aan of 28 June 2018, Golaha Yurub, oo rajaynaya in la sii daayo of Boqortooyada Ingiriiska, ayaa lagu wadaa Halabuurka ee Baarlamaanka soo socda Yurub yaraynta tirada kuraasta 751 in 705, 46 ka 73 sii daayay kuraasta British lagu soo leexday in dhigay suuragalnimada in la wayneeyo dheeraad ah oo ka mid ah Midowga, iyo kuwa kale 27 la mid ah afar iyo toban qaybsan Dawladaha xubinta ka badhxo. Macnaha halkan, France waa 5 dhaxli kursi oo dheeraad ah, oo ay matalaad ee Baarlamaanka Yurub ka 74 in 79. Sharcigan in la qaatay ka hor doorashada 26 May 79 bixisaa in kuraasta loo qaybin doonaa sida ay xukunka saamiyeed si ay celcelis ahaan ugu sareeya, laakiin kuraasta 5 ugu danbeysay ee loo qoondeeyey oo aan la buuxin doonaa ilaa saarka dhabta ah UK.
Ka qaybqaadashada ka qaybgalka
Tan iyo doorashadii ugu horeysay ee Yurub ee 1979, ka qaybgalka ayaa si dhib la soo dhacaysa: 61% in 1979, 57% in 1984, 49% in 1989, kaca yar ee 53% in 1994, 47% in 1999, 43% ee 2004, 41% in 2009, ka hor inta soo kabasho ku dhiiran in 43% in 2014. horumar ah si qallafsan la mid ah disaffection ku tartiib ah codbixiyayaasha oo dhan Midowga Yurub. doorashada Opinion, sida niyad codbixinta diiwaan saddex todobaad ka hor doorashada, si dhib leh ka tago calaamad kasta oo ku celiska ah. Waxaa laga yaabaa, si kastaba ha ahaatee, soo laabashada liiska hal macnaha guud bulsho iyo waqti siyaasadeed, waxa ay keeni kartaa in ay ku bilaabatay doorashada.
Qodobka loo qoondeeyey macaamiisheena Sidoo kale akhri Xayiraad, qasab maaha. Sidee u sharxi kartaa isbeddellada sii kordhaya ee codbixiyayaasha?
Qiimaha celinta kharashka doorashadu wuxuu ku xiran yahay 9,2 million euro ee liis kasta. Waxaa lagu kordhin karaa 184 000 euros kharashaadka socdaalka iyada oo qayb ka ah ololaha ka jira waaxyada dibadda iyo beelaha. Si kastaba ha noqotee, liiska kaliya ee la helay ugu yaraan 3% codadka la dhiibay waxay xaq u yeelan doonaan dib u bixinta kharashka ololaha.
Qodobka Source: https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/05/04/elections-europeennes-trente-trois-listes-ont-ete-deposees-un-record_5458222_823448.html
Algeria: Said Bouteflika, kii walaal u yahay Madaxweynihii hore, la xiray, iyadoo labo madaxda hore ee warfaafinta